ဒါဟာ.. လောကရဲ့သစ္စာတရား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Opinion - Op-ed » ဒါဟာ.. လောကရဲ့သစ္စာတရား
Posted by kai on Mar 26, 2011 in Opinion - Op-ed, Think Tank | 13 comments
သဘာဝတရားမှာ ထိန်းညှိခြင်း သီးသန့်ရှိတယ်..။ ဂေဟစံနစ်တမျိုးခေါ်ချင်ခေါ်ပေါ့..။
အဲဒီစံနစ်အရ… ကောလဟလ ကြိုက်တဲ့လူတွေ အများစုနေကြရ ဒေသ၊နိုင်ငံဖြစ်ရင် ကောလဟလ တွေမရပ်မနားထွက်လာတတ်တယ်..။
ဂမ္ဘီရတွေ.. သဘာဝလွန်တွေ..နှစ်သက်ကိုးကွယ်သူများရင် မှားတဲ့အတွေးအခေါ်တွေပို့ ချသင်ပြတဲ့ ဘိုးတော်နတ်ကတော်ဘုန်းကြီးတွေ များလာတတ်တယ်..။
တဦးဦး..တဖွဲ့ တစု… တဂိုဏ်းက .. ပြောသမျှလုပ်သမျှကို .. ဝေဖန်ဆန်းစစ်တာမရှိပဲ.. လက်ခံနေရသူများလာရင်.. လူတန်းစားအလွှာတွေ ကွာဟမှုကြီးလာတတ်တယ်..။
သစ္စာဆိုတာအမှန်တရားပဲ..။ အမှန်တရားက လွဲချော်လာပြီဆိုရင်.. ပျက်စီးခြင်းဆီဦးတည်တယ်..။ ဒါက သဘာဝရဲ့ထိမ်းငြိခြင်းပဲ..
ဆိုတော့… ကောလဟလတွေ ထွက်တာများရင်.. ကောလဟလကအမှန်တရားဖြစ်တာနည်းရင်.. အဲဒါကို လက်ခံသူများတဲ့နယ်၊ဒေသ နိုင်ငံဟာ ပျက်စီးခြင်းကို ဦးတည်လာတယ်..။
မှားယွင်းတဲ့အတွေးအခေါ်တွေ လူတွေကျင့်ကြံအားထုတ်ကြတာများရင်.. အမှားအယွင်းလုပ်တာတွေများပြီး .. အဲဒီလူတွေစုနေတဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်း.. ယဉ်ကျေးမှု.. နိုင်ငံ ..ပျက်စီးခြင်းစီဦးတည်တယ်..။
လူတန်းစားကွာဟတာများလာရင်… အာဏာရှင်အုပ်ချုပ်မှုပုံသဏ္ဍန်ရှိတဲ့ အစိုးရလက်အောက်မှာ နေကြရတော့တယ်..။
ကလေးအသေအပျောက်နှုံးမြင့်တက်လာရင်..။ လူတွေရဲ့သက်တန်းအသက်တွေတိုလာရင်..။ လူတွေရဲ့ ဘုန်းကံ တန်ခိုးတွေကျလာရင်..။ သဘာဝဘေးအန္တရယ်ကျတာများလာပြီး ကျတိုင်း လူအသေအပျောက်တွေများလာရင်..။ ဒါတွေ..ဒါတွေကို .သဘာဝတရားရဲ့ သတိပေးချက်လို့ မှတ်ယူသင့်တယ်..။ မှားတဲ့လမ်းကို လျှောက်တဲ့သူများနေပြီဆိုတာ.. လောကပါလနတ်မင်းတွေ.. သတိပေးပြောပြနေပြီ လို့ မှတ်နိုင်ပါတယ်..။
ဒါဟာ.. သစ္စာနဲ့..သစ္စာရဲ့တန်ခိုးသတ္တိပဲ..။ အမှန်တရားဖက်ကနေ .. သဘာဝရဲ့ထိန်းညှိပေးခြင်းပဲ..။
ဒီသတိပေးချက်ကို .. လက်မခံပဲနေသူတွေများရင်… မျက်စိစုံလုံးပိတ်ပြီး ..မိမိတို့သာမှန်နေဆဲပဲအော်နေရင်… အဲဒီလူတွေများတဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်း၊ ဒေသတိုင်းပြည်ဟာ .. (Failed State )ကျဆုံးသောတိုင်းပြည်ဆီဦးတည်သွားတေ့ာတယ်..။
ဒီလိုသဘာဝရဲ့သတိပေးချက်ကို .. ဘာအစွဲမှမပါပဲ ကြည့်ချင်ရင် .. အချက်အလက် Factsနဲ့ကြည့်ရပါတယ်..။ အင်္ဂလိပ်လိုမှာတော့ .. ပြောစကားတခုရှိတယ်..။ ကြောက်ရွံချင်းနဲ့ နိုင်ငံရေးကင်းပြီး အချက်အလက်နဲ့ကြည့်ရတယ်တဲ့..။
အချက်အလက်နဲ့ကြည့်တယ်ဆိုတာ.. ဒေတာတွေ၊ ကိန်းဂဏန်းတွေနဲ့ ကြည့်တာ ဆုံးဖြတ်တာကို ခေါ်တာပါ..။ ဥပမာ.. မြန်မာပြည်ချမ်းသာသလားကြည့်ချင်ရင်.. ဂျီဒီပီ(လူတွေရဲ့ ကုန်ထုတ်စွမ်းအား)ဂဏန်းတွေကြည့်တာမျိုးပေါ့..။
လူတွေ ပျော်နေသလား စိတ်ချမ်းသာနေသလားသိချင်ရင်.. စံညွှန်းကိန်းတွေနဲ့တိုင်းတာတာမျိုးပေါ့..။ ရှေးကတည်းက လူသားတိုင်းလက်ခံထားတဲ့ ဆိုရိုးတခုကတော့.. ဂဏန်းတွေဟာ မလိမ်ပါဘူးတဲ့လေ..။
ဆိုတော့ ..နည်းပညာ..အင်ဂျင်နီယာရင်းနဲ့ပြောရရင်တော့ .. reverse engineering နည်းနဲ့ အဖြေထုတ်တာပါ.၊ ဥပမာ.. ဂဏန်းတွေကမလိမ်ဘူးဆိုတာလက်ခံရင်..ဂဏန်းတွေ.အချက်အလက်တွေကနေ.. ဘာမှားခဲ့သလည်း..ပြောင်းပြန်ရှာကြည့်တာမျိုးပေါ့..။
ကဲ.. စဉ်းစားဝေဖန်သုံးသတ်ကြပါဦး..။ မြန်မာပြည် ဘယ်မှာနေသလဲ.. ဘာတွေလုပ်သင့်သလဲ.. ဘာတွေမှားနေသလဲ ..ဆိုတာ..။
ုပုန်းနေတဲ့ သဂျီးတော့ ပစ်ကွင်းထဲကို ထွက်လာပြီ၊ ကြုံတောင့်ကြုံခဲ ဒုလ္လဘ ဆွမ်းကြီးလောင်းပွဲကို ဝိုင်းဝန်းဆင်နွှဲကြပါ ရွာသားအပေါင်းတို့….
အဟမ်း… ပြောရရင်တော့ သဂျီးမင်းရေးတဲ့ “ဂမ္ဘီရတွေ.. သဘာဝလွန်တွေ.. နှစ်သက်ကိုးကွယ်သူများရင် မှားတဲ့အတွေးအခေါ်တွေပို့ ချသင်ပြတဲ့ ဘိုးတော်နတ်ကတော် ဘုန်းကြီးတွေ များလာတတ်တယ်..။” ဝါကျကနေ စသင့်တယ်။
သူတို့ကို မှားနေတယ်လို့ ပညတ်တပ်လိုက်ကထဲက သဂျီးမင်းမှာ ဘက်လိုက်မှုပါနေလို့ သစ္စာမထိုက်တော့ဘူး။ သိပ္ပံပညာသည် ယနေ့မှန်ကန်ကြောင်း သက်သေပြနေပေမဲ့ ရှေးယခင် သိပ္ပံပညာမထွန်းကားခင်မှာ ဝိဇ္ဇာ၊ သိဒ္ဓိ မဟိဒ္ဓိ ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ လူသားတွေ ရှင်သန်ခဲ့ရတယ်။ အဲသလိုသာမဖြစ်ခဲ့ရင် လူသားတွေဟာကျောက်ခေတ်ယဉ်ကျေးမှုက တက်လာကြမှာ မဟုတ်ဘူး။ ရှေးခေတ်လူသားတွေရဲ့ ဆင်ခြင်တွေးခေါ်နိုင်စွမ်းသည် ယနေ့ခေတ်လူများထက် မညံ့ဘူးဆိုတာ ရာဇဝတ်မှု၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်ဆီးမှု၊ ကိုယ်ကျင့်တရား စောင့်ထိန်းမှုတွေကို လေ့လာကြည့်ရင် သိနိုင်ပါသည်။ ရုပ်ဝတ္တုတိုးတက် အတ္တများလာတဲ့အခါ ကပ်တွေဆိုက် စစ်ပွဲတွေဖြစ်ရတာ သာဓကပါ။ သိပ္ပံပညာဘာကြောင့် လွှမ်းမိုးနေလဲဆိုရင် ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်အရ နိမ့်ရာကနေမြင့်လာလို့၊ ဝိဇ္ဇာလိုင်း ဘာကြောင့်ပျောက်ကွယ်သွားလည်းဆိုရင် အမြင့်ရောက်ပြီးပြန်ကျသွားလို့။မှန်လိုက်မှားလိုက်နဲ့ အမြဲတည်မနေခြင်းကြောင့် တနေ့မှာ သိပ္ပံပညာလဲ ဆုံးခန်းတိုင်ပြီး လူသားတွေ ဝိဇ္ဇာဖက် ပြန်လှည့်ရဦးပါမယ်။ နာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘာသာရပ်များ ထွန်းကားပါအုံးမယ်။ အဲသည်မတိုင်ခင်မှာတော့ နာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာပညာ၊ ဘာသာတရား ပျက်ဆီးပျောက်ကွယ် ရပါအုံးမယ်။ သဘာဝတရား ဖြစ်စဉ်တခုပါ။ ဒါကြောင့် အစွဲအလမ်းအကြီးအကျယ်မထားဘဲ ဖြစ်ထွန်းဆဲခေတ်နဲ့အညီ ပြုပြင်နေထိုင်ပြီး မတူညီတဲ့ပညာရပ်များ၏ အားနည်းချက်များကို အပြစ်ရှာရှုံ့ချနေမည့်အစား မြှုပ်တချည်ပေါ်တလှည့် သစ္စာမထိုက်သော လူသားအကျိုးပြု ဘာသာရပ်များအဖြစ် လေးလေးစားစား ဆက်ဆံသင့်သည်။
သဂျီး အလိုတော်ရိတွေ အပေါ်မှာ ကျုပ်မန်းထားတာကို ဒစ်နှစ်ခါကြိုက်ထားလို့ မတရားတဲ့ အာဏာစက်အောက်မှာ အမှန်တရား ပျောက်ရပါတော့မယ်။ ကယ်ကြပါအုံး ရွာသားအပေါင်းတို့…..
အားမငယ်နဲ့ အလိုတော်ရိတွေ ၂ခါ လုပ်ထားပေမဲ့ ဆူး တခါ လိုက်ပေးထားတယ်။
ကြိုးစားလိုက်အုံး နောက်ထပ်…ဆယ်နှစ်ဆယ်နှစ် (ကျော်ဟိန်းလေသံဖြင့်)
လက်ရှိတော့ ဘယ်မှာ နေနေသလဲ မသိသေးတဲ့အတွက် ဘာတွေလုပ်သင့်ပြီး ဘာတွေမှားပြီး ပြုပြင်သင့်သလဲဆိုတာကို မစဉ်းစားရသေးပါဘူးလေ………… အရင်အတိုင်းပဲပေါ့
သိပ်မှန်တာပေါ့ ဂဏန်းတွေက မလိမ်တတ်ပါဘူး။
ဒါပေမယ့် မတိုးတက်နဲ့နိုင်ငံအများစုမှာက ရလာတဲ့ဂဏန်းတွေက လိမ်ထားတဲ့ဂဏန်းတွေဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
လူတစ်ဦးချင်းစီရဲ့အသိအမြင်အတွေးသာ မှန်မှန်လေးတိုးတက်လာမယ်ဆိုရင် တိုင်းပြည်ကလည်းဖြည်းဖြည်းခြင်းတိုးတက်လာမှာပါ။
အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တာပါ။အမှန်တရားဆိုတဲ့ကောင်းကြောင်းတွေကိုလွဲချော်လာရင် ပျက်စီးခြင်းဆိုတဲ့ ဆိုးကျိုးတွေ ဟာတချိန်ချိန်မှာ မုချဖြစ်လာမှာပါ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာစာရင်းဇယားကိန်းဂဏန်းညွှန်ပြကိန်းတွေကိုနှစ်ရှာဖွေစုဆောင်းစိစစ်ထုတ်ပြန်ပေးရတဲ့ဌာနကြီးတခုရှိပါတယ်။ CSO လို့ခေါ်တဲ့ Central Statistical Organization ပါ။ အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့်စီးပွားရေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဝန်ကြီးဌာနဆိုလားဘဲ) ရဲ့လက်အောက်က ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ကဦးဆောင်တဲ့ဌာနကြီးပါ။ မောင်မိုးညို ကျန်းမာရေးဌာနမှာလုပ်စဉ်က နှစ်စဉ် ကျန်းမာရေးကိန်းဂဏန်းတွေကိုအဆိုပါဌာနကြီးကိုပို့ရတဲ့တာဝန်လဲယူရပါတယ်။ ကျန်းမာရေးဌာနမှာ ဖွားသေစာရင်းဌာနစိတ်လို့ခေါ်တဲ့ ရန်ကုန်(၅၂)လမ်းထောင်မှာရုံးသေးလေးတခုရှိပါတယ်။ နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖြစ်ပေါ်မှုတွေရဲ့ အရေးအပါဆုံးညွှန်ပြကိန်းဖြစ်တဲ့ Infant Mortality Rate နဲ့ Under –5mortality rate ကိုအဲ့ဒီကနေပို့ရတွက်ချက်ထုတ်ရပါတယ်။ (၁၉၉၀-၉၅) ၀န်းကျင်က မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ညွှန်ပြကိန်းဟာ (အမှန်ကိုပြောရရင်) ကလေးတထောင်မွေးတိုင်းမှာ (၇၅)လောက်သောကလေးများဟာ လူ့လောကကနေ အသက်တနှစ် မပြည့်ခင်ခင်မှာသေဆုံးကြရပါတယ်။ လုလသမဂ္ဂရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုအနဲဆုံးနိုင်ငံတွေတန်းစီလိုက်ရင်တောင်၊ မြန်မာနိုင်ငံဟာအ၀ီစိအောက်ရောက်နေပါတယ်။ ဒါကို အဲ့ဒီအချိန်က အမျိုးသားကျန်းမာရေးကော်မီတီရဲ့ ဥက္ကဌကြီးဖြစ်သူ ထောက်လှမ်းရေးအကြီးအကဲကြီးက ဒေါသပုန်ထပြီး (၄၀)လုပ်ပါလို့ တချက်လွှတ်မိန့်လို့ အဲ့ဒီအချိန်က ကျန်းမာရေးဒုဝန်ကြီးလုပ်သူက မျက်စိမျက်နှာပျက်ပြီးအခန်းထဲကထွက်လာရတာမြင်ယောင်မိပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ ကိန်းဂဏန်းအစစ်အမှန်က UNICEF လက်ထဲရောက်သွားပြီးမို့ ညတွင်းချင်း အရင်ပေးပို့လိုက်တဲ့ protocol မှားကြောင်း၊ Infant Mortality rate အမှန်က (၄၀) ဖြစ်ကြောင်း၊ ဟုတ်တာရောမဟုတ်တာရောလုပ်ပြီးအတင်း နသားပါရလုပ်လိုက်ကြရပါတယ်။
များစွာသော “လုပ်ချ” များထဲ့က “လုပ်ချleak” တခုအကြောင်းပါ……။
ဟုတ်ပါတယ်၊မြန်မာပြည်မှာ စာရင်းမှန်ရဖို့ မဖြစ်နိုင်သေးပါ၊အမျိုးသားစီမံကိန်းဌာနက နှစ်စဉ်
စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို data လိုက်ကောက်ပါတယ်ကောက်တဲ့သူတွေကလဲ ပြီးပြီးရောကောက်တယ်၊ဖြေရတဲ့သူတွေကလဲ
အခွန်ဦးစီးကို လိမ်ထားတာနဲ့ မကိုက်မှာစိုးတော့ ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးဘယ်လောက်ပြောပြော ဆက်လိမ်ကြတော့တာဘဲ၊
ဒါထက် စကားမစပ်၊ဂျပန်ငလျင်ကျတော့ သူတို့ဘာမှားနေလို့ လောကပါလနတ်တွေက သတိပေးတယ်ပြောရမှာလဲ၊
Japan GDP = $5.390 trillion ($5390 billion)
Estimated loss after Japan tsunami : +100 billion US$
Total Death Toll In Japan Exceeds 18000
‎Official Death Toll In Japan Disaster Updated To 8450 ( Mar 21 2010)
Myanmar GDP = $34.262 billion
Nargis = 200,000 people were dead or missing, and damage totaled to 10 billion dollars (USD).
ဂျပန်လူဦးရေ..သန်း၁၂၀ ကျော်မှာ .. လူ ၂သောင်းသေပြီး.. သူ့ကုန်ထုတ်စွမ်းအား သန်းထောင်ပေါင်း ၅၀ကျော်ရဲ့ အပုံ ၅၀ပုံတပုံ ငလျှင်ကြောင့် ဆုံးရှုံးပါတယ်..။
မြန်မာ့လူဦးရေ.. သန်း ၆၀ကျော်မှာ ..လူ၂သိန်းလောက်သေပြီး .. ဂျီဒီပီ ၃၄ဘီလီယန်ရဲ့ ၃ပုံတပုံလောက်ပျက်စီးဆုံးရှုးံသွားပါတယ်..။
လူတွေအသက်ဆုံးရှုံးတာမှာ .. မြန်မာတွေက ပိုတယ်.။ ဂျပန်ကနည်းတယ် နှိုင်းပြနေတာတော့ မဟုတ်ရပါဘူး..။ ကိန်းဂဏန်းတွေက ပြတဲ့အချက်အလက်တွေ သိစေချင်လို့ပါ..။
မြန်မာတွေဟာ.. ဧရာဝတီတိုင်းမှာ ..နာဂစ်..။
စီအန်အန်ကတော့ ..ပြောနေတယ်..။ မြန်မာပြည်ဟာ.. ဒီနှစ်ပိုင်းမှာ.. သဘာဝဘေးတွေ အများဆုံးခံရတဲ့ တိုင်းပြည်တဲ့..။
ဆိုတော့… လူတွေလုပ်တဲ့.. စီးပွားရေး..နိုင်ငံရေး..စံနှုန်းတွေမှာရော….။
ကုလကထုတ်တဲ့ညွှန်းကိန်းတွေမှာတော့.(ယုံချင်ယု့ မယုံချင်နေ).. ထိတ်ဆုံး ၁၀မှာ အမြဲပါတယ်..။(နောက်ကတွက်ရင်)
မြန်မာတွေဟာ.. ဘယ်သူမှမသိမမြင်..လက်တွေ့ကိန်းဂဏန်းကောက်လို့မရတဲ့.. ဂမ္ဘီရ.. သဘာဝလွန်..နာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာ..၀ိဇ္ဇာနယ်မှာ..ထိတ်ဆုံးရှိတယ်ဟေ့..။ စိတ်တွေချမ်းသာ..ပျော်ရွှင်နေကြတယ်ဟေ့.. (စည်ပိုင်းခေါင်းထဲထည့် )ဘယ်သူမှ မကြားအောင်အော်ပြောပါမယ်..။
ဖြစ်တာတွေအားလုံးကို ကြည့်ရင် ၂၀၀၇ ရွှေဝါရောင်လှုပ်ရှားမှုမှာ ဘုန်းကြီးတွေကို စစ်တပ်က ပစ်သတ်လို့ တိုင်းပြည်ကို ကာကွယ်ထားတဲ့ အရံအတားတွေ ပျက်ကုန်ပြီး ဘီလူးသရဲတွေ ဝင်စီးတာဗျို့။ သက်သတ်လွတ်စား၊ သီလစောင့်၊ တရားကျင့်မှ အရင်လို သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကနေ လွတ်မယ်ဗျို့။ ရုပ်ဝတ္ထု တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတွေကိုတော့ ဂျပန်ငလျင်က ဥပမာပြလိုက်တယ်ဗျို့။ ဒါတောင် အကင်းလေးပဲ ရှိသေးတယ်ဗျို့။
လောကပါလနတ်မင်းတွေ သတိပေးနေပြီဆိုတာထက် လောကပါလတရားတွေပျက်ယွင်းနေပြီ မဟာပထ၀ီမြေကြီးသည် ထမ်းထားခြင်းငှာပင်ပန်းလှကြောင်း ငြီးတွားခြင်း ဟုထင်ပါသည်။ လောကပါလတရားများ ကျင့်သုံးရန်သတိပေးသည်ဟုထင်ပါသည်။